Memento Tsamba Yekuvhura - Dhizaini magazini
Tsamba Yekuvhura Zvese zvinotanga nekutenda. Tsamba dzinovhurika tsamba dzinovhura idzo dzinoratidza basa: Memento haingori seti yemidziyo asiwo nheyo yezvinhu inoratidza kuonga nemanzwiro evashandisi. Kuburikidza semantics yezvigadzirwa nemifananidzo yakapfava yema professional akasiyana, magadzirirwo uye nzira dzakasiyana dzechinhu chimwe nechimwe cheMemento chinoshandiswa zvinopa mushandisi zviitiko zvemoyo zvakasiyana siyana.
Zita rechirongwa : Memento, Vagadziri zita : Bryan Leung, Izita remutengi : Bryan Leung.
Zvigadzirwa zveumhizha, zvekushandisa, zvekutakura zvinhu uye zvigadzirwa zvezvipo
Tsamba Yekuvhura Bryan Leung Memento